गायिका आस्था राउतविरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी :: Setopati
गायिका आस्था राउतविरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, माघ ५
गायिका आस्था राउतविरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ।
राउतलाई अभद्र व्यवहार कसुरको जाहेरी दर्तामा पक्राउ गर्न प्रशासनले आइतबार प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीका अनुसार अब राउत औपचारिक रूपमै प्रहरी खोजी सूचीमा परेकी हुन्।
‘उहाँ प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेको र फेला परिनसकेको हुनाले अहिलेसम्म फरार हो,’ सुवेदीले सेतोपाटीसँग भने।
सुवेदीले प्रहरीमा जाहेरी परेपछि जोकोही पनि खोजी सूचीमा रहने र पक्राउ नपरिसकेको अवस्थालाई ‘फरार’ भनिएको हो। राउत अहिले कार्यक्रमको सिलसिलामा भारतको सिक्किममा रहेको बुझिएको छ।
‘उहाँलाई खोज्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ,’ सुवेदीले भने।
राउतविरूद्ध अभद्र व्यवहार मुद्दाको जाहेरी काठमाडौं प्रहरीमा आइतबारै जाहेरी दर्ता भएको थियो।
प्रहरी जवान रमिसा श्रेष्ठले दिएको अभद्र व्यवहार कसुर अन्तर्गतको जाहेरी आइतबार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले दर्ता गरेको थियो।
प्रहरी कर्मचारीलाई बुधबार दुर्व्यवहार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई नै जाहेरी मानेर प्रहरीले राउतमाथि अभद्र व्यवहार कसुरको मुद्दा दर्ता गरेको हो।
अभद्र व्यवहार कसुरको मुद्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्छन्। यसमा एक वर्षसम्म कैद र जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी जवान श्रेष्ठमाथि दुर्व्यवहार गरेको प्रतिवेदनमाथि अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न काठमाडौं परिसरलाई निर्देशन दिइएको थियो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले राउत र प्रहरी जवान श्रेष्ठबीच भएको कुराकानीको भिडियो तथा त्यसबेला रेकर्ड भएको सिसिटिभी फुटेजसमेतको प्रतिवेदन संकलन गरेर महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी (मेट्रो)मा पठाएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनमा जवान श्रेष्ठले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको उल्लेख गरेकी छिन्। मेट्रोले उक्त प्रतिवेदनमाथि कारबाही गर्न परिसर पठाएको थियो।
यस्तै, राउतले सो घटनालाई लिएर बाहिर ल्याएको भिडियो पनि प्रहरीले संकलन गरेको छ। सो भिडियोका आधारमा राउतलाई साइबर अपराधसम्मको कसुरमा अनुसन्धान गरिने महानगरीय कार्यालयले जनायो।
‘सो भिडियोमा प्रहरीमाथि जुन किसिमको अपशब्द र संगठनकै मान मर्यादामा चोट पुर्‍याउने किसिमको शब्द उल्लेख छ, त्यसले साइबर अपराधसम्मको कारबाही आकर्षित गर्छ,’ रानीपोखरीकै एक अधिकृतले भने।
त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका एसएसपी रामकृपाल साहका अनुसार माघ १ गते राउत भद्रपुर जाने क्रम यो घटना भएको थियो। कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त सुरक्षाकर्मीले चेकजाँच गर्ने क्रममा राउतले दुर्व्यवहार गरेको देखिएको साहले बताए।
के भएको थियो?
बुधबार राउत भद्रपुर जाने क्रममा मध्यान्ह विमानस्थलमा पुगेकी थिइन्। सो क्रममा उनी आन्तरिक टर्मिनलको एक्सरेमा छिर्दा रातो बत्ती बलेपछि सुरक्षाकर्मीले ज्याकेट फुकाल्न लगाएका थिए।
मेटल डिटेक्टिभ एक्सरेले रातो देखाएपछि सुरक्षाकर्मीले पुन: चेकजाँच गर्छन्। यसक्रममा राउत झोक्किएर ज्याकेट फुकाल्दै एक्सरे मेसिनमा हालेकी थिइन्।
सो बेला उनले हातमा लिइरहेको कफीको कप प्रहरी कर्मचारीले सुरक्षित गरिदिएकी हुन्छिन्। चेकजाँच सकिएपछि उनले त्यो फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। तर, राउतले कप ठेल्छिन्। केहीबेरमा कपबाट कफी पोखिएको थियो र राउतको ज्याकेट भिजेको थियो।
यसक्रममा राउतले प्रहरी कर्मचारीलाई केहीबेर गाली गरेकी थिइन्।
प्रकाशित मिति: आईतबार, माघ ५, २०७६
चारदिन हराएर भेटिएका वडाध्यक्ष भन्छन् - विप्लव कार्यकर्ताले यातना दिएपछि दाङ झरेँ
प्रधानमन्त्रीको फेरि गुनासो- सञ्चारमाध्यमले गाली गर्दा सरकारले सहनुपर्ने, यसो छोयो भने बुरुक्क उफ्रिने!
बहसमा बोल्दा ट्रम्पले अवरोध गरेपछि वाइडेनले भने,'विल यु सट अप, म्यान'
वामदेवको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा, अर्को पेशी शुक्रबार